Boat fenda cover 1 - China J na K auto ngwa
Anyị bụ ndị manufacurer maka fenda cover, e nwere 2 dị iche iche ihe onwunwe nhọrọ, ha acrylic na polyester, niile ihe onwunwe bụ na ajị anụ ụdị, nke chebe agba nke ụgbọ mmiri, dị ka nke ọma dị ka fenda. Atụmatụ: Ọ bụ eco-enyi na enyi, magburu onwe drapeability na softness, ịda mbà, nla, na ebù-eguzogide ọgwụ, ala mmiri absorbency, dịtụ ngwa ngwa ihicha. UV, abrasion na Unyi eguzogide ọgwụ. igwe keosusu ma ọ bụ ọkọchị cleanable. Embroidery: anyị na-enye ndị embroidery ọrụ dị ka ahịa chọrọ.
Anyị bụ ndị manufacurer maka fenda cover, e nwere 2 dị iche iche ihe onwunwe nhọrọ, ha acrylic na polyester, niile ihe onwunwe bụ na ajị anụ ụdị, nke chebe agba nke ụgbọ mmiri, dị ka nke ọma dị ka fenda.
Ọ bụ eco-enyi na enyi, magburu onwe drapeability na softness, ịda mbà, nla, na ebù-eguzogide ọgwụ, ala mmiri absorbency, dịtụ ngwa ngwa ihicha. UV, abrasion na Unyi eguzogide ọgwụ. igwe keosusu ma ọ bụ ọkọchị cleanable.
Embroidery: anyị na-enye ndị embroidery ọrụ dị ka ahịa chọrọ.
Osote: Boat fenda cover 2
Boat fenda Cover
Boat fenda ekpuchi
Omenala Boat fenda Cover